Indlu kaChuck. Ikhabhathi epholileyo yelog ekwindlela ezolileyo kumgama nje omfutshane ukusuka elunxwemeni kunye neziko lelali elineevenkile zokutyela kunye neeresityu. Kumda wepaki yelizwe engaselunxwemeni yaseLincolnshire ilungele ikhefu elifutshane elizolileyo okanye njengesiseko ngelixa ujonga iilwandle kunye namaphandle aneedolophu zentengiso yembali kunye nokuhamba okuthandekayo kwiLincolnshire Wolds.
Inja enye encinci/ephakathi yamkelekile.
Ikhabhinethi inegumbi elinye lokulala, ibhedi ephindwe kabini enebhedi engaphantsi kunye nendawo yokuxhoma. Igumbi lokuhlambela le-en-suite, Ikhitshi elivulekileyo elinendawo yokuhlala eneengcango ezivuleleka kwipatio enombono kuwo wonke amasimi. Igadi encinci yecala.
Siyakwamkela ukuba uze nenja yakho kodwa indawo encinci ayifanelekanga izinja ezinkulu.
Chuck's Cabin kukuhamba nje okufutshane ukusuka 2 pubs zasekuhlaleni zombini enika ukutya kwakhona Chapel point North ulwandle Observatory indawo enkulu ikofu kunye nekeyiki emva kohambo olude okanye olufutshane elunxwemeni. IKhabhinethi ikwindawo ezolileyo kodwa ikufutshane neefama ngoko ngamanye amaxesha uya kuba nengxolo yezilwanyana.
Kukho nayiphi na imibuzo okanye ulwazi.
Kwakhona jonga iphepha lethu likaFacebook https://www.facebook.com/Chuckscabin/
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chapel Saint Leonards